စုပ်ယူ Filter ကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Suction Filter Factory
မှတ်ချက် - ဤစီးရီးအတွက်သုံးသောထွက်ပေါက်အနားကွပ်၊ တံဆိပ်တုံး၊ ဝက်အူများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်။ ၀ ယ်သူသည်ဂဟေဆော်သံ tubeQ သာလိုအပ်သည်။ အချက်ပြ၏ချိတ်ဆက်မှုသည် M18 x 1.5; အချက်ပြမပါဘဲချည်နှင့်ပလပ်ကိုပေးလိမ့်မည်။
Tfb Suction Type High Precision Filter Series ဖြစ်သည်
ဤစစ်ထုတ်မှုမျိုးကို high precision suction filtration ၏ hydraulic system တွင်သုံးနိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်အသုံးမပြုမီသတ္တု (သို့) ရော်ဘာအမှုန့် (သို့) အခြားအညစ်အကြေးများကိုစစ်ထုတ်ပါ။
ဆီတိုင်ကီဘေးဘက်ရှိ Ycx Series Self-Sealing Oil-Sucking Filter
အဆိုပါ filter သည်ရေနံစုပ်စက်နှင့်အခြားဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုကာကွယ်ရန်၊ အဆီစုပ်စက်၏ဆိပ်ကမ်းရှိဆီများမှအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရန်သင့်တော်သည်။
filter တွင် transmitter, bypass valve, self sealing valve နှင့်မိလ္လာစုဆောင်းခွက်တို့ပါ ၀ င်သည်။ အသုံးဝင်သောပုံစံတွင်ကြီးမားသောဆီဖြတ်သန်းနိုင်စွမ်းနှင့်သေးငယ်သည့်ခံနိုင်ရည်အားသာချက်များရှိသည်။ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Cgq Strong Magnet Line Filter Series များ
ခိုင်မာသောသံလိုက်ပြွန် dropper ကို coercive force မြင့်မားပြီး anti-dropping net ဖြင့်ခိုင်မာသောသံလိုက်ပစ္စည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်း၏စုပ်ယူနိုင်သောအင်အားသည်သာမန်သံလိုက်ဓာတ်ပစ္စည်းများ၊ micron အရွယ် ferromagnetic ညစ်ညမ်းမှုများကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်သံများ၏သက်ရောက်မှုကိုကျော်လွှားရန်သံလိုက်ညစ်ညမ်းစေသောအရာများအားပြန်လည်စုပ်ယူသည်။ ၀ တ်ခြင်း၊ ဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း။ electro-hydraulic Servo တွင်၊
ညစ်ညမ်းမှုကိုစစ်ထုတ်ရန်လျှပ်စစ်သံလိုက်လမ်းကြောင်းအဆို့ရှင်အောက်တွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုအထူးသဖြင့်အလိုအလျောက်နှင့် servo system တွင်သုံးသည်။
၎င်းတွင်ညစ်ညမ်းမှုညွှန်ကိန်းရှိသည်။ filter element ကိုညစ်ညမ်းမှုဖြင့်ပိတ်ဆို့ပြီးဖိအားသည် 0.5Mpa သို့ရောက်ရှိသောအခါဒြပ်စင်သည်ပြောင်းလဲသင့်သည်ကိုပြသောအချက်ပြလိမ့်မည်။
ဤ filter ကို glass fiber ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အခြား filter များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် filter ကိုသေးငယ်သောအရွယ်အစားသို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၎င်းတွင်မြင့်မားသောစစ်ထုတ်မှုတိကျမှု၊ ကန ဦး ဖိအားနည်းခြင်းနှင့်အညစ်အကြေးစုပ်ယူနိုင်စွမ်းမြင့်မားခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ စစ်ထုတ်မှုအချိုးအစား ၃၊၅၊၁၀၊၂၀> ၂၀၀၊ စစ်ထုတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်> ၉၉.၅%နှင့် ISO စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။
ဖိအားမြင့်ပန်းကန် filter ကိုစနစ်အတွင်းအပို ၀ င်ရောက်ခြင်း (သို့) ပြင်ပမှ ၀ င်ရောက်ခြင်းကြောင့်ထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံခြားပစ္စည်းများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက် system ၏အဆို့ရှင်အပိတ်တွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် SERVO စနစ်တို့အတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ utility model သည် high-precision control element နှင့် executive element ကိုလေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့်စောစော ၀ တ်ခြင်း၊ ၀ င်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ပျက်ကွက်မှုကိုလျှော့ချပေးပြီး element ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြာရှည်စေသည်။
Nju Tank Mounted Suction Filter Series ဖြစ်သည်
NJU-series filter များကို hydraulic system များတွင်အသုံးများသည်။ filter ကိုအပေါ်ဆုံး (သို့) tank ၏ဘေးဘက်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ filter head သည် tank မှထွက်သင့်ပြီး filter ပန်းကန်ကို tank ၏ဘေးဘက် (သို့) အပေါ်ဘက်သို့ထည့်သင့်သည်။ ပလပ်ပေါက်ကိုစုပ်စက်နှင့် ၂၅၅ မီနစ် ၁၆၀ မီလီမီတာအမျိုးအစားတွင်ဖြုတ်နိုင်သောအနားကွပ်များပေါင်းစပ်ထားသည်၊ တင့်ကားကိုလုံးဝအလန့်တကြားဖြစ်စေရန်နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သောအမြင့်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေစဉ်၊ filter အဖုံးကိုဖွင့်ပါ၊ filter element ကို sludge cup နှင့်ထုတ်။ သန့်ရှင်းပါ။ ဖြတ်သန်းခွင့်အဆို့ရှင်နှင့်လေဟာနယ်ကို filter တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ filter element ကို ဖြတ်၍ ဖိအားကျဆင်းသည့်အခါ O.OIBmpa သို့ရောက်သောအခါညွှန်ပြချက်သည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုပြလိမ့်မည်။ မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမျှမလုပ်ဆောင်ဘဲဖိအားကျဆင်းသွားပါက ၀.၀၂Mpa အထိမြင့်တက်လာပါက၊ အ ၀ င်အ ၀ င်အဆို့ရှင်သည်ဆီထဲသို့စီးဆင်းမှုသေချာစေရန်ဖွင့်ပေးလိမ့်မည်။
2. O./MPa Max လည်ပတ်မှုဖိအား: O./MPa
3. အပူချိန်အပိုင်းအခြား (° C): -30 ° C -90 ° C
၄။ filter head ရှိ vacuum indicator သည်အချက်ပြလိမ့်မည်။
စစ်ထုတ်မှုတိကျမှု (ညနေ)： 80、100、180
သံလိုက်မပါဘဲ ၀ င်လျှင် mit
အကြမ်းဖျဉ်း Wu နှင့် Xu Suction Filter Series များ
ဤ filter သည်ကြမ်းတမ်းသော filter တစ်ခုဖြစ်ပြီးစုပ်စက်၏အ ၀ င်တွင်တပ်ဆင်နိုင်ပြီးပိုမိုကြီးမားသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသက်မရှူနိုင်အောင်စုပ်ထုတ်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ filter သည်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ဆီဖြတ်သွားရန်လွယ်ကူလျှင်၎င်းသည်သေးငယ်သည့်ခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းတွင် c- ချိတ်ဆက်မှုနှင့် flanged ဆက်သွယ်မှုလည်းရှိသည်။ ဤစစ်ထုတ်အမျိုးအစားကိုဝါယာကြိုး mesh filter နှင့် notched wire filter ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Foam Sprayer Nozzle ဖြစ်သည်, အမြှုပ် Nozzle, Foam Lance Nozzle ဖြစ်သည်, Karcher 0.6 L Foam Jet Nozzle Fj6, High Expansion Foam Nozzle ဖြစ်သည်, Nozzle အမြှုပ်,